Iintsomi zothando lothando | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 20/06/2022 22:44 | Ubudlelwane
Uthando lothando lobunye bobuxoki obukhulu buvela kuphela kwihlabathi elingeyonyani okanye eliyintsomi lemiboniso bhanyabhanya okanye iincwadi. Olu hlobo lothando lubangela ukufezeka okukhulu phakathi kwamalungu esi sibini kunye nokubaxwa kwayo okungafaniyo nento eyenzekayo kwihlabathi lenene. Kubalulekile ukubaleka kwezi ntsomi kwaye uphile uthando lokwenene nomntu omthandayo.
Kwinqaku elilandelayo Sithetha ngothotho lweentsomi zothando lothando kunye nokuba ezi ntsomi zinokwenza njani umonakalo omkhulu kwesi sibini.
1 Ukukhangela isiqingatha esingcono
2 uthando lunako ngayo yonke into
3 Abantu abachasayo bayathanda kwaye batsale omnye komnye
Ukukhangela isiqingatha esingcono
Umbono wesiqingatha esingcono yenye yezo ntsomi ezinxulumene nothando lothando. Kucingelwa ukuba uthando lukhethekile yaye kukho umntu ehlabathini oya kusenza sonwabe ubomi bethu bonke. Abantu abaninzi benza impazamo enkulu yokulinda ubomi babo bonke kweso siqingatha esingcono esingasokuze size. Yonke le nto ibubuxoki obungeyonyani apho uthando lothando luhamba khona. Eyona nto ilungileyo kukuphila ubudlelwane obahlukeneyo obunceda umntu acacelwe koko akufunayo kumbandela wothando.
uthando lunako ngayo yonke into
Uthando oluvela kwintsomi luyamangalisa kwaye lunokoyisa nawuphi na umqobo obekwe phambi kwalo. Ebomini bokwenyani, kwenzeka into eyahlukileyo kwaye oko kukuba uthando alukwazi ukwenza yonke into. Uthando apho imilinganiselo eyahlukileyo ingahlonitshwayo ayinakuvunyelwa. Akukho nto yenzekayo ukuba uthi hayi uthando kunye nobudlelwane. Eyona nto ibalulekileyo kulonwabo lwesiqu sakho, kungakhathaliseki ukuba uhlala yedwa okanye nomnye umntu.
Abantu abachasayo bayathanda kwaye batsale omnye komnye
Into eqhelekileyo kukuba abantu ababini abaneengcamango ezahlukeneyo kunye nezimvo abagcina ubudlelwane, baphela bejongene rhoqo. Iingxabano eziqhubekayo kunye neengxabano zihlala zilimaza ngokunzulu naluphi na uhlobo lobudlelwane.. Kwiimeko ezininzi, ukungavisisani okunjalo ngokuphathelele iingcinga kudla ngokuba yingxaki enzulu xa kufikelelwa kumba wokulondoloza ulwalamano olugqalwa njengolunempilo. Kwiimeko ezininzi kunzima ngokwenene ukugcina ubudlelwane nomntu owahluke ngokupheleleyo nochaseneyo.
Ngamafutshane, uthando lothando njengoko siluqonda lwenzeka kuphela kwintsomi. Kucacile ukuba ebomini, uthando lunzima kakhulu kwaye lunzima. Eyona nto ibalulekileyo kukunandipha uthando olusempilweni noluqinileyo noluhlala luhleli. Kukho uluhlu lwamaxabiso ekufuneka ebekhona ngalo lonke ixesha kubudlelwane, nokuba kukuthembana, intlonipho okanye unyamezelo. Ukudibanisa konke oku kuvelisa uthando oluphilileyo kunye nentlalontle ethile ngaphakathi kobudlelwane. Khumbula ukubaleka kangangoko kunokwenzeka kuthando olwenzeka kwintsomi kwaye wonwabele uthando lokwenyani, oluqolileyo nolusempilweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Iintsomi zothando lothando